မြန်မာ့ နျူကလီးယား စီမံကိန်းများကို စစ်ဆေးရန် IAEA တောင်းဆို | Ko Oo + Ma Thandar
« ပျံကျဈေးသည်များ မြို့တော်ဝန်ကို ဈေးနေရာတောင်း
ကရင်ပြည်နယ်တွင် ကုန်တင်ကားများ ချောဆွဲနေ »
ထက်အောင်	Friday, 24 December 2010 17:18 – ဧရာဝတီ
နိုင်ငံတကာ အဏုမြူစွမ်းအင် အေဂျင်စီ (IAEA) မှ ထိပ်တန်း နျူကလီယား ပညာရှင်ဟောင်း နှစ်ဦးအကြား မြန်မာစစ် အစိုးရရဲ့ နျူကလီယား ရည်မှန်းချက်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလွန်ရှုပ်ထွေး နက်နဲတဲ့ နည်းပညာပိုင်ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုတွေ မကြာသေးခင်က ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်း IAEA ဟာ အခုနောက်ဆုံး သံသယဖြစ်နေတဲ့ နျူကလီးယား စီမံကိန်းနေရာတွေကို စုံးစမ်းစစ်ဆေးဖို့ နည်းလမ်းရှာဖွေနေပါတယ်။
စစ်အစိုးရ လျှို့ဝှက် တည်ဆောက်နေသော စက်ရုံများအနက် တခုရှိ စက်ပစ္စည်း ထိန်းချုပ်ခုံရှေ့တွင် တွေ့ရသော ဗိုလ်မှူး စိုင်းသိန်းဝင်း။ (ဓာတ်ပုံ – AP)
အမေရိကန် အခြေစိုက် The Wall Street Journal သတင်းစာကြီးက IAEA ကို ကိုးကားပြီး “သံသယဖြစ်ဖွယ် နေရာများကို သွားရောက် စစ်ဆေးဖို့ ဘယ်လ်ဂျီယံ နိုင်ငံသား ဟာမန်း နက်ကက်စ် ဦးဆောင်တဲ့ IAEA ရဲ့ အဏုမြူ ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာဌာနက မြန်မာအစိုးရထံ စာတစောင် ရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်” လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
IAEA ရဲ့တောင်းဆိုမှုအပေါ် စစ်အစိုးရက ဘယ်လို တုံ့ပြန်မယ် ဆိုတာကတော့ မသိရသေးပါဘူး။
ဒါ့အပြင် စက်တင်ဘာလမှာ ကျင်းပတဲ့ IAEA ရဲ့ ၅၄ ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာ မြန်မာကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်သူ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးတင်ဝင်းက “ယခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံက နျူကလီယား စီမံကိန်းတခုကို လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည်ဟု နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယားများက ရေးသားချက်များသည် အခြေအမြစ်မရှိသော စွပ်စွဲချက်များသာဖြစ်သည် … မြန်မာနိုင်ငံသည် နျူကလီယားလက်နက် ထုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပြန့်ပွားခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများကို မည်သည့်အခါမျှ လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ” လို့ ထပ်မံငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ IAEA ရဲ့ နောက်ထပ် အရာရှိဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်း အိုလီ ဟိန်းနွန်နန်က သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်း ရောဘတ်ကယ်လီကို စိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်အခြေစိုက် ProPublica နဲ့ PBS သတင်းဌာနတို့ ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ “Need to Know” အစီအစဉ်မှာ “ဒါဟာ နျူကလီးယား ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ပါ၊ တခြား ဘာအတွက်မှ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောရလောက်တဲ့ အချက်အလက် တခုတလေမှ မရှိပါဘူး” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် “နျူကလီယားလက်နက် မပြန့်ပွားရေးစာချုပ်နှင့် ဆက်စပ်သော အဏုမြူဆိုင်ရာ လုံခြုံစိတ်ချရမှု ကာကွယ်ရေး သဘောတူညီချက်” ကို IAEA နဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရတို့အကြား လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆိုထားချက်အရ သံသယဖြစ်နေတဲ့ နျူကလီယား စီမံကိန်းနေရာများကို သွားရောက်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကို ကျင့်သုံးဖို့ IAEA မှာ အခွင့်အာဏာရှိပါတယ်။
အဲဒီစာချုပ်ကို ၁၉၉၅ ခုနှစ် ဧပြီလမှာ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ထိုစဉ်က မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝင်းအောင်နဲ့ IAEA ရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဟန်းဘလစ်တို့ သြစတြီးယားနိုင်ငံ ဗီယင်နာမြို့မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ နျူကလီယားလက်နက် မပြန့်ပွားရေးစာချုပ် (NPT) အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ၁၉၉၂ ခုနှစ်ကတည်းက ရှိနေခဲ့သလို အရှေ့တောင် အာရှ နျူကလီယားလက်နက် ကင်းမဲ့ဇုန်စာချုပ်ကိုလည်း ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။
အဏုမြူဆိုင်ရာ လုံခြုံစိတ်ချရမှု ကာကွယ်ရေး သဘောတူညီချက်ရဲ့ ပုဒ်မ ၂ က “ဤသဘောတူညီချက်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံ နယ်နမိတ်အတွင်း နိုင်ငံတော်၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်တွင် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်က ထိန်းချုပ် အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အသုံးပြုသော နျူကလီးယားလုပ်ငန်း အရင်းအမြစ် အားလုံး သို့မဟုတ် ထူးခြားသည့် ဓာတ်ရောင်ခြည် ပျံ့လွင့်နိုင်သော သတ္တုပစ္စည်းများ၏ အဏုမြူဆိုင်ရာ လုံခြုံစိတ်ချရမှု ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းကို IAEA က လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ဝတ္တရားနှင့် အခွင့်အရေးရှိသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် အဆိုပါ ဓာတ်သတ္တုများကို နျူကလီယားလက်နက် သို့မဟုတ် တခြားပေါက်ကွဲစေတတ်သော နျူကလီယားပစ္စည်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းရှိမရှိ သေချာစေရန် တခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်” လို့ ဖော်ပြထားပါသည်။
ထိုသဘောတူညီချက်ရဲ့ ပုဒ်မ ၃ အရ တကယ်လို့ IAEA က သံသယဖြစ်နေတဲ့ နေရာတွေကို သွားရောက်စစ်ဆေးချင်ရင် မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ IAEA နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ့် ၀တ္တရားရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် IAEA ရဲ့ စစ်ဆေးရေးမှူး ခန့်အပ်တာနဲ့ စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်တဲ့နေရာတွေမှာ စစ်အစိုးရရဲ့ သဘောတူညီမှုကို ပထမ ရယူရပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ စစ်အစိုးရက စစ်ဆေးရေးမှူးခန့်အပ်တာနဲ့ စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကို လက်ခံဖို့ အကြိမ်ကြိမ် ငြင်းဆန်နေမယ်ဆိုရင် IAEA အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က အဲဒီကိစ္စကို သင့်လျော်သလို ဆက်လက် အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အေဂျင်စီရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်တာကို သဘောတူညီချက်ရဲ့ ပုဒ်မ ၉ (က) မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီလိုအချိန်မှာပဲ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ နျူကလီယား ရည်မှန်းချက်များအပေါ် အငြင်းပွားမှုကို ပိုပြီးအားကောင်းစေတဲ့ နောက်ထပ် သတင်းဆောင်းပါတပုဒ်ကို The New Republic က ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Burma Bombshell ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆောင်းပါးရှင် ဂျိုရွှာ ကာလန်ဇစ် (Joshua Kurlantzick) က “လွန်ခဲ့တဲ့လကပဲ ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု တခုက မြောက်ကိုရီယားနိုင်ငံဟာ တားမြစ်ထားတဲ့ နျူကလီယားဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကရိယာတွေကို မြန်မာနိုင်ငံကို တင်ပို့ခဲ့တဲ့ နောက်ထပ် အထောက်အထားတွေ တွေ့ရှိခဲ့တယ်” လို့ ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းက မီးခိုးကိုတော့ ရှာဖွေထောက်လှမ်း တွေ့ရှိခဲ့ပါပြီ။ အခုအခါမှာတော့ ဒီမီးခိုးထွက်လာတဲ့ မီးပုံကို ရှာဖွေဖို့ IAEA မှာ တာဝန်ရှိလာပါပြီ။ ထို့အတူ မြန်မာနိုင်ငံက အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်တဲ့ အာဆီယံအသင်းကြီးကလည်း IAEA ရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ထောက်ခံရမှာ ဖြစ်တယ်။ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှဒေသအတွင်း နျူကလီယားလက်နက် မပြန့်ပွားရေးဇုန် သဘောတူစာချုပ်ကြောင့် အာဆီယံအသင်းကြီးမှာလည်း တာဝန်ရှိနေလို့ပါပဲ။
This entry was posted on December 24, 2010 at 11:26 am and is filed under ဖြန့်ဝေခြင်း, News.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.